Edhisheni timu yeEconomia Finanzas | Ehupfumi Zvemari
Ehupfumi Zvemari ndeye webhusaiti iyo yakazvarwa muna 2006 ine chinangwa chakajeka: kushambadza ichokwadi, chibvumirano uye ruzivo rwemhando yepamusoro pamusoro penyika yezvehupfumi nemari. Kuti uwane chinangwa ichi zvakakosha kuve nechikwata chevapepeti vanove nyanzvi mumunda uye vasina matambudziko mukutaura chokwadi sezvachiri; hapana rima zvido kana chero chinhu chakadai.
MuEconomia Finanzas unogona kuwana ruzivo rwakasiyana siyana kubva pazvinhu zvakakosha zvakadai se chii VAN uye IRR kune mamwe akaomesesa akadai se matipi edu ekusiyanisa mari dzako zvinobudirira. Zvese izvi misoro uye zvimwe zvakawanda zvine nzvimbo pawebhusaiti yedu, saka kana iwe uchida kutsvaga zvese zvatiri kutaura nezvazvo, chinhu chakanakisa ndechekuti pinda chikamu ichi kwaunozoona rondedzero yakakwana ye misoro yese yakafukidzwa.
Chikwata chedu chakaburitsa mazana ezvinyorwa nezvehupfumi, asi kuchine mimwe misoro yakawanda yekuvhara. Ehe unoda kujoina webhusaiti yedu uye uve mumwe wechikwata chedu chevanyori chaunofanira chete zadza fomu iri uye isu tichazosangana newe nekukurumidza sezvazvinogona.
Hupfumi chinhu chinotinakidza kubva panguva yekutanga yatinotarisana nekuwana raramo. Nekudaro, rwakawanda rweruzivo urwu hatidzidze, saka ini ndinoda kubatsira vamwe kuti vanzwisise pfungwa dzehupfumi uye kupa matipi kana mazano ekuvandudza kuchengetedza kana kuzviita.
Ndanga ndichiisa mari mumisika kwemakore, chaizvo nekuda kwechimwe chikonzero kana imwe nyika yenyika dzekudyara iri kundifarira kubvira pandanga ndiri kusekondari. Zvese izvi chikamu ini ndagara ndichirera pasi pechiitiko, kudzidza, uye nekuenderera mberi kugadzirisa pane zviitiko. Hapana chinhu chandinofarira kupfuura kutaura nezve economics.
Ndine shungu neruzivo, uye kunyanya nezve hupfumi uye kuendesa ruzivo rwangu kuvanhu kuti vakwanise kubata mari yavo zvirinani. Ehezve, nekutarisa uye kuzvimiririra, zvaizoshaya zvimwe.
Jose Manuel Vargas chinobata mufananidzo
Ndine shungu nezve economics uye mari, saka ndatanga chirongwa ichi kubva kwandinotarisira kuramba ndichidzidza, nekugovana ruzivo rwangu, ndichienderana nezvose zviri kuitika pasi rino.
Ini ndine shungu nezve kudzidza kwehupfumi uye zvemari, zvekuti zvidzidzo zvangu zvakaguma zvabatana nezve idzi ndima. Chishuwo changu ndechekupa kugoverwa kwakaenzana kwezviwanikwa, izvo zvinofanirwa kuve chinhu cheEconomics seSocial Science.
Zita rangu ndinonzi Julio Moral uye ini ndine degree mu economics kubva kuComplutense University yeMadrid. Changu chikuru chishuviro ndezvehupfumi / zvemari uyezve, inonakidza nyika yekudyara. Kwemamwe makore ikozvino, ndanga ndine rombo rakanaka kwazvo rekugona kuita raramo nekutengesa paInternet.